उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको उच्चस्तरीय वार्ता रद्द, अब के हुन्छ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको उच्चस्तरीय वार्ता रद्द, अब के हुन्छ ?
एजेन्सी । विश्वभर नयाँ राजनीतिक तरंग ल्याएकोउत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको उच्चस्तरीय वार्ता रद्द गरेको छ । उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि वार्ता रद्द भएको हो ।
विश्व राजनीतिले नयाँ मोड लिने चर्चा चलिरहँदा उत्तर कोरियाको यो निर्णयले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच पनमुनजोनमा आज वार्ता हुने तयारी थियो । तर, मिडिया रिपोर्टका अनुसार अन्तिम समयमा उत्तर कोरिया पछि हटेको छ ।
उत्तर कोरियाको यो निर्णयले जुन १२ अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको वार्ता हुने नहुनेमा पनि प्रश्न खडा भएको बताइएको छ । उत्तर कोरियाको समाचार एजेन्सी केसीएनले भनेको छ, ‘अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘उक्साहट’ हो । यसले कुनै पनि देशलाई फाइदा गर्दैन ।’
पुर्व नियम अनुसार नै अमेरिका र दक्षिण कोरियाले शुक्रबारबाट ‘मेक्स थन्डर’ नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास सुरु गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । संयुक्त अभ्यासमा बी–५२ बम वर्षक विमान र एफ–१५ जेट विमानसमेत करिब १ सय लडानु विमान अभ्यास गरिएको बताइएको छ ।